Ndi otu ederede | Akụkọ Njem
Actualidad Viajes bụ ebe nrụọrụ weebụ Actualidad Blog. Anyị website raara nye ụwa nke njem na ya anyị na-atụ aro ebe mbido mgbe anyị bu n'obi ịnye ozi na ndụmọdụ niile gbasara njem, ọdịbendị dị iche iche nke ụwa na onyinye kachasị mma na ndị njem nleta. Ọtụtụ afọ anyị wepụtara a njem Podcast nke nwere nnukwu ihe ịga nke ọma, na-enweta ya ebe mbu na European Podcast Awards na ngalaba Azụmaahịa na Spain na nke anọ na Europe n'afọ 2011 yana ịbụ onye ikpeazụ na afọ 2010 y 2013.
Ndị otu nchịkọta akụkọ nke Actualidad Viajes bụ nke mejupụtara omiiko njem na globetrotters nile di iche iche obi dị gị ụtọ ịkọrọ gị ahụmịhe ha na ihe ọmụma ha. Ọ bụrụ n’ịchọrọ iso na ya, egbula oge dere anyị site n'ụdị a.
Kemgbe m bụ nwata, ọ masịrị m ịma ebe ndị ọzọ, omenaala na ndị ha. Mgbe m na-eme njem, m na-edetu ka m nwee ike ibufe ya ma emechaa, site n'okwu na onyogho, ihe ebe ahụ bụ maka m ma ọ nwere ike ịbụ maka onye ọbụla gụrụ okwu m. Ide ihe na ime njem yiri nke a, echere m na ha abụọ ga-ewe uche gị na obi gị.
Ringkekọrịta ahụmịhe m gburugburu ụwa na ịnwa ịgbasa agụụ m maka njem bụ ihe m hụrụ n'anya. Marakwa omenala ndị obodo ndị ọzọ na n'ezie njem. Ya mere ide banyere ihe ndị a, na-eme ka ọ bịaruo ọha mmadụ nso, na-emeju m afọ ojuju.
M na-anụ ọkụ n'obi mgbe niile banyere asụsụ sitere gburugburu ụwa. Yabụ dị ka onye nkuzi bekee, ọ masịrị m ịmata mbụ asụsụ ndị ahụ ma ọ bụ olumba dị iche iche. Njem ọ bụla m mere bụ mmụta ọhụrụ m ga-echeta n’oge ndụ m niile.
Ndị ndezi gara aga
Gụsịrị akwụkwọ na Mgbasa Ozi, Achọrọ m ide na ịchọpụta akụkọ ọhụrụ na ebe ọ bụla m nwere ike icheta. Ga njem bụ otu n'ime agụụ m na ọ bụ ya mere m na-agba mbọ ịchọta ozi niile gbasara ebe ndị ahụ m na-atụ anya ịhụ otu ụbọchị.
Ha na-ekwu na e nwere ụdị ndị njem dị ka ọtụtụ mmadụ n’ụwa. N'oge m na-eme njem, achọpụtara m ụdị ọdịmma dị iche iche anyị nwere ike ịbanye na ya, ya mere na Actualidad Viajes m ga-enye gị ozi ịchọrọ iji nwee ọ enjoyụ na ezumike gị zuru oke n'akụkụ ọ bụla nke ụwa.
Echere m na njem bụ otu n'ime ahụmahụ ndị kasị baa ọgaranya mmadụ nwere ike ibi ... Ihere, na a chọrọ ego maka nke a, nri? Achọrọ m na m ga-ekwu maka ụdị njem niile dị na blọgụ a mana ọ bụrụ na m ga-enye ihe dị mkpa, ọ bụ ebe ndị ahụ ka m ga-aga na-ahapụghị ọgaranya n'ụzọ.
Ebe ọ bụ na m dị obere, achọrọ m ịga njem obere oge, enwere m ike ịghọ onye njem na-adịghị agwụ ike. Ebe kachasị amasị m: India, Peru na Asturias, ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ ndị ọzọ. Enwere m mmasị ịdekọ na vidiyo ihe na-amasị m na karịa na-ese foto ya dị ka a ga - asị na ọ bụ onye Japan. Enwere m mmasị ịnwale ọdịnala ọdịnala nke ebe m gara ma wetara m usoro nri na nri iji mee ha n'ụlọ ma kesaa onye ọ bụla.